BUDDHA WAS BORN IN NEPAL. बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो।: Tamang, Sherpa, Bhote, Dolpo, Lhopa, Lhomee, Mugumpa and Hyolmo these all are one that is Tamang
Tamang, Sherpa, Bhote, Dolpo, Lhopa, Lhomee, Mugumpa and Hyolmo these all are one that is Tamang
आदिवासी जनजाति महासंघले तामाङ जातिलाई सीमान्तीकृत समुहमा राखेको छ । जनगणना २०५८ अनुसार नेपालमा तामाङको संख्या १२ लाख ८२ हजार ३ सय ४ छ । तामाङलाई इतिहासकारले घोडामाथि सवार गर्ने सैनिकमा रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । हिमाली गाउँमा तामाङ भनेको हेर्दामा हिस्सी परेको र साइत हेरेर शुभकार्य गर्ने मानिस भनिन्छ ।
रसुवामा बस्नेहरु तामाङ नभएर तमाङ हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । हिमाली तामाङ जातिको भाषिक शब्द उच्चारणमा आकारन्तको प्रयोक कम्ती हुन्छ । अन्य जिल्लाका भन्दा रसुवाका तामाङको भाषामा केही भिन्नता छ । उखान टुक्का, नस्तर, गीत, मानी, लामा तथा झाँक्रीले गर्ने धार्मिक काममा हिलामी बौद्ध धर्मको लामा लिपीमा उल्लेखित भाषा र बोलीचाली भने हिमाली तामाङ भाषामा गरिन्छ । यो रसुवाका तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विशेषता हो ।
उहिले यो जातिलाई अन्यले भोटे, लामा वा तामाङ भनेर सम्बोधन गर्थे । उत्तरी दिशामा तिब्बत (भोट) पर्ने र भोट-बर्मेली समुदायमा पर्ने यो जातिको शारीरिक बनावट, धर्म, संस्कृति, सामाजिक परम्परा, वेशभूषा, भाषा तिब्बतसित मिल्दोजुल्दो भएकाले यस्तो भनेको हुनसक्छ । अहिले भोटे, लामा र तामाङ भिन्न जाति हुन् कि ? भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ । हो भोटे नितान्त अलग अर्थ बताउने शब्द हो । भोटे शब्दले मानिसको जाति नभएर राष्ट्रियता बताउँछ । यो शब्दले तिब्बतको नागरिक जनाउँछ । नेपालमा भने भोटे आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचीकृत भइसकेको छ । लामा र तामाङ यी दुई शब्द तामाङ जातिसित सरोकार राख्ने पर्यायवाची हुन् । हिजोआज अन्य जातिका मानिसले पनि हिमाली धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्न थालेकाले लामा (ज्ञानी, पुजारी) शब्दले तामाङबाहेकलाई पनि जनाउन थालेको छ । तामाङले अब उप्रान्त तामाङ मात्र लेख्नु राम्रो हुनेछ । बौद्धमार्गी तामाङ जातिमा आफ्नो नामको पछाडि लामा लेख्न थालेको लामो समय भएको छ । लामा भन्नसाथ तामाङ जाति भनेर बुझिन्छ । यसैगरी पूर्वमा बस्ने तामाङ श्यार्पा (शेर्पा) र पश्चिममा बस्नेलाई नुप्पा (नुप्रिपा) भनिन्छ । श्यार भनेको पूर्व र नुप भनेको पश्चिम हो । पूर्वेली (श्यार्पा, शेर्पा) र पश्चिमेली (नुप्पा, नुप्रिपा) भनेर छुट्टै जातिको रुपमा स्थापित भई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकृत भइसकेको छ । ल्होपा, ल्होमी (दक्षिणी), डोल्पो (डोल्पावासी), मुगुम्पा (मुगुवासी), ह्योल्मो (हेलम्बुवासी) ले पनि आदिवासी जनजातिको मान्यता पाइका छन् । तामाङ जातिलाई मूलत: दुई समुहमा बाँड्न सकिन्छ । एउटा हो, नाक छेड्ने, अर्को नाक नछेड्ने । नाक छेड्ने तामाङ जाति काठमाण्डौँ उपत्यका, यस वरपरका र केही तराईमा बसोबास गर्छन् । नाक नछेड्ने उच्च पहाड र हिमाली भेकमा बस्छन् । दुवैको वेशभूषा र भाषामा फरक भए पनि धर्म, कर्म र सामाजिक मान्यता एउटै छ । भौगोलिक एवं अन्य समुदायको प्रभावका कारण भिन्नझैँ देखिने नाक छेड्ने र नछेड्नेमा भिन्न नभएको प्रमाण तिनीहरुभित्रको थर, गोत्र (वंश) सोधेपछि थाहा हुन्छ ।
बेग्लाबेग्लै ठाउँमा एउटै थर, गोत्रलाई फरक शब्द प्रयोग गरिए पनि यिनीभित्र हाडनाता लाग्छ । तामाङ, शेर्पा र ह्योल्मो नामको अलक जातिमा सूचीकृत भए पनि आफ्नो वंशभित्र कुटुम्ब चलाउँन सकिँदैन । अरु जाति वा समुदायको वेशभूषा, भाषा, सामाजिक परम्परा, धर्म, संस्कृतिको बाहुल्यबाट प्रभावित हुनु र भौगोलिक बनावटबाट भाषिक, सांस्कृतिक, वेशभूषा आदिमा हुन गएको सामान्य भिन्नतालाई आधार मानेर एउटै तामाङ जाति भिन्न हुनु राम्रो होइन । विशेषगरी हिमाली भेकमा बसोबास गर्नेले आफ्नो स्वपहिचान खोज्दै छुट्टै आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचीकरण गर्ने वा अन्य समूहमा मिसिन जाने हो भने स्वअस्तित्व खोजी गर्ने नाममा अस्तित्व नै गुमाउँन बेर छैन ।
बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक पक्षबाट हेर्ने हो भने हाम्रो पुनर्जन्म हुन्छ । पुनर्जन्म र आफ्ना मृत पितृलाई शुद्ध पार्नु प्रत्येक बौद्धमार्गीको कर्तव्य हो । तिनै पितापुर्खाबाट प्राप्त जात, थर वा गोत्रलाई परिवर्तन गर्न खोज्यो भने के होला ? सम्बन्धित निकायले यसबारे व्यापक अनुसन्धान नगरी आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकृत गर्दै जानु हुँदैन । यसो गरेमा आदिवासी जनजातिको सूचीक्रम ५९ मात्र होइन सयौँ नाघ्ला तर सदियौदेखि समुदायमा परिचित जाति भने लोप हुने वा अन्य समुदायमा विलय हुने खतरा रहिरहन्छ । चौरीगाईको दुधबाट बनाइने चीजको नाउँ ‘याक चीज’ राखेजस्तै बिडम्बना हुन जान्छ । (याक भाले जाति बुझाउँने हिमाली घरपाल्तु जनावर हो, याकले दुध दिदैन ।) जुनै पहिचान, भाषा, संस्कृति अंगीकार गरे पनि तामाङ आखिर तामाङ नै हुन्छ ।
हिमाली भेकमा बस्नेहरु संस्कृतिमा धनि भए पनि शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर छन् । विभाजनको मूल कारण यही हो । अर्को कारण पहाड र मधेसमा बस्ने तामाङमा संस्कृतिमा एकरुपता नदेखिनु । यसो हुँदा साँच्चै हामी अर्कै जातिका हौँ कि ? भन्ने भ्रम परेको छ । लेखक, अनुसान्धनकर्ताहरुले भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिलाई आधार मानेर टुक्रा लगाउँने कार्य गरे । मिडियाले पनि त्यसरी नै प्रचार गरे । तामाङ जातिलाई डम्फु र सेलो गीतमार्फत मात्र चिनाउँनु दुर्भाग्य थियो । हाम्रा मौलिक संस्कृतिमध्ये सीमित संस्कृतिको मात्र प्रचार गर्न सक्यौँ । क्षेत्रीय एवं भौगोलिक भिन्नताको आधारमा तामाङ जातिको पहिचान गर्न सकेनौँ । के टुङ्ना(डम्ङेन), पिवाङ, लिङ्पु(पुली), तामाङको मौलिक बाजा होइनन् ? नम्तर, मानी, क्षाङ्लु, याच्युङ, श्युङ्लु, शेलु, छेर्लु, क्षाम्लु, चोम्लु, थुलु, यावे तामाङका मौलिक गीत होइनन् ? के क्षुबा, बख्खु, आङ्दुङ, दोर्मो, बुरे सुक्रे, सेम्बु, छिरिङ किङ्कप, केनाम तामाङका मौलिक पहिरन होइनन् ? यति धेरै मौलिक चीज हुँदाहुँदै हामी किना अरु समुदायमा विलय हुने ? नेपाल र तिब्बत सीमानाको बीच भागलाई केन्द्रविन्दु मानेर चारैदिशाको आधारमा शेर्पा, ल्होमी, ल्होपा, नुप्रिपा भएका हुन् । त्यसैको अनुसरण गरेर डोल्पा, मुगुम्पा हुँदै ह्योल्मोबाट योल्मोपा जनजातिसमेत देखिन थालेको छ ।
(स्रोत:कान्तिपुर दैनिक/ लेखक: फुर्पा तामाङ)